Iwo akanakisa mafomu ekutsvaga basa kubva kune yako iPhone | IPhone nhau
Tiri panguva yakaoma yekushandira, kunyanya kune vechidiki vane zvakawanda zvekubata nema mobile phones uye software mune zvese, ndosaka Nhasi tinoda kukuunzira muunganidzwa wemamwe maapplication akanakisa ayo achakubatsira iwe nekukurumidza kuwana basa kubva kune yako iPhone. Makambani mazhinji uye akawanda arikushandisa aya madhijitari emabasa edhijitari kuhaya nyanzvi kubva kumatunhu ese, uye hapana chinogona kuve nyore pane kusarudza kupihwa uye kusaina neunotangazve kubva pasofa kumba, ndosaka tiri kuenda kuzoongorora izvi zvinonakidza mafomu. .
Muchidimbu, kuunganidzwa uku kuri kuzokupa iwe dzimwe nzira dzakasiyana uye tichaenda kukuudza zvimwe zvinoita kuti zvishandiso izvi zvive zvakasiyana nevamwe vese vari muApp App Store, zvimwe zvichibva pane ruzivo uye zvimwe zvichibva pane zvemukati zvavanopa. Uye ndezvekuti pamwe nzira uye ruzivo rwekuve nemafungiro ekutsvaga mukutsvaga basa hazviwanikwe kune wese munhu. Saka, handei ikoko nemusanganiswa uyu Isu tinovimba kuti iwe unozowana mhedzisiro iwe yaunoda kana zvasvika pakutsvaga basa mune iyo nguva iyo iri yakaoma kwazvo uye zvese zvinangwa zvinokosheswa.
1 Infojobs - Mambo muSpain neItaly
3 JOB Nhasi
Infojobs - Mambo muSpain neItaly
Infojobs akaveza ramangwana rakanaka, akabatsira mazana ezviuru zvevanhu muSpain neItaly kuwana basa, uye Iyi chikuva inosanganisira ese maSME uye makuru makambani mune yega yega chikamu, iwe unozokwanisa kunyorera mabasa kuGarrigues, EY, uye kunyangwe Deloitte pasina zvakanyanya kuyedza.
Iyo zvakare ine yekutevera kweCV yedu, ndiko kuti, iwe unozogona kucherechedza kana vaverenga CV yako uye nekuziva ipapo ipapo kana iwe wakasarudzwa kana kuraswa neHuman Resources timu yekambani iri mubvunzo. Pasina mubvunzo imwe yeakanakisa dzimwe nzira dzatinogona kuwana izvozvi muApple App uye iyo inoita kuti zvive nyore kwauri mune mbiri nyika dzakaratidzwa. Iyo ine yakasimba kusanganisirwa mune yazvino nharaunda uye ivo vanoti vakapa zvinopfuura mazana mapfumbamwe emabasa emabasa muna900.000.
Imwe yeanonyanya kufarirwa mafomu mumakore apfuura maererano nekutsvaga basa muApple App inoshushikana, isu tichawana akawanda kushambadza zvese paterevhizheni uye mune yakanyorwa midhiya. Uye ndeyekuti Jobandtalent inoti yakaisa vanhu zviuru mazana mana nemazana masere chete kusvika zvino mwedzi uno waKukadzi. Ichi chishandiso zvakare chemahara uye zvakare ine geolocation, mafirita nehunyanzvi uye zvidzidzo, pamwe neiyo yakakwana edition yeedu kharikhulamu.
Imwe nzira inonakidza ine zvibodzwa zvakanaka muApple App uye yakasununguka zvachose, chimwe chinhu chekuchengeta mundangariro, nekuti kana iwe uchitsvaga basa, chekupedzisira chaunoda kushandisa mari pazviri, handiti?
JOB TODAY: Jobho Anotsvagavakasununguka
Imwe yeanonyanya kufarirwa maficha atinogona kuwana muApple App, mushandirapamwe wayo wepa terevhizheni wakapindawo zvakadzama nemashambadziro ake akasarudzika Izvi zvakare zvinosanganisira masystem manejimendi manejimendi kana tangosarudzwa, zvakadaro, chakakosha pano kutsvaga basa.
JOBTODAY yakasununguka zvachose uye ine chat uye yekupindura sisitimu yekushandisa mukati maawa makumi maviri nemana, haufanire kumirira kwenguva yakareba kuti uone kana iwe pakupedzisira wakasarudzwa kana kwete. Zvirinani zvisingaite chokwadi. Yakazara yemahara uye yakashandurwa muchiSpanish, French neChirungu.
Yekupedzisira mune ino runyorwa ndiyo isinganyanyo zivikanwa asi isiri idiki inoshanda, chero sarudzo yakanaka kana uchitsvaga basa. Tichava nezviziviso zvinoshanda mukutsvaga kwedu basa, nekuda kweizvi isu tinongofanirwa kusarudza mafirita uye zvatinofarira.
Uye zvakare, ine kusangana kwakanaka neiyo LinkedIN kunyorera, saka kunyoresa nekuzadza kwedu kudzidza kuchave kuri nyore, zvisinei, zvinokwanisika kuti ine mashoma mashandisirwo kupfuura matatu apfuura nekuti ndiyo isinganyanyo kufarirwa pakati peaya aripo.
Iwe unoziva here mamwe mabasa ekutsvaga basa? Tiudze mubhokisi remashoko kana pa Twitter!
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Iwo akanakisa manyorerwo ekutsvaga basa kubva kune yako iPhone
BioProtect tweak yakagadziridzwa uye ikozvino inotsigira iOS 10